| मुस्लिमबाट आलम विजयी
मेचीकाली : 2010-09-23 19:06:15
काठमाडौ, ७ असोज : आरक्षित सिटको मतगणना अन्तर्गत मुस्लिम कोटाबाट संस्थापन पक्षका मो. आफ्ताव आलम विजयी भएका छन् । उनले १ हजार २ सय ६२ मत पाए । रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी आलम माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकारमा श्रम मन्त्री छन् । उनका प्रतिद्वन्दी मोहम्मद रजी हदरले ७ सय ७६ मत पाए । मुस्लिमबाट १० जना मैदामा उत्रिएका थिए । आरक्षित कोटाको मतगणना जारी छ । महिलाको कोटामा मीना पाण्डे, उमा रेग्मी, पुष्पा भुसाल र कमला पन्त अगाडि छन् । महिला कोटामा ६ सीट आरक्षित छ ।
मधेशी कोटामा अजय चौरसीया तथा दलित कोटामा मीन विश्वकर्मा र मान बहादुर विश्वकर्मा अगाडि छन् । यसैबीच निर्वाचन समितिले राति ८ बजेसम्म मात्र मतगणना गर्ने जनाएको छ । स्थगित मतगणना शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि पुनः सुरु हुने छ । नेपाली काँग्रेसको १२ औं माहाधिवेशनको केन्द्रीय सदस्य छनौटका लागि भएको निर्वाचनको मत गणना भइरहेको छ । आरक्षित सिटको मतगणना सकिएपछि खुला र अञ्चलको मत गणना हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
आरक्षण अन्तर्गतसमावेशी कोटातर्फ ६ जना महिला, २ महिलासहित ५ दलित, २ महिलासहित ५ मधेसी, २ महिलासहित ५ आदिवासी जनजाति र १ जना मुस्लिम का लागि मत गणना भइरहेको छ । मत परिणाम साँझ ५ बजेसम्ममा आउने बताइएको छ ।गणना प्रक्रिया बिहान ९ बजे देखि सुरु भएको हो ।
आरक्षण अन्तर्गतको मत सकिएपछि खुला र अञ्चलको मतपनि आजै गणना गर्ने निर्वाचन अधिकृत बावसदेव आचार्यले जानकारी दिएका छन् । निर्वाचित सदस्यहरूको मत गणना कांग्रेसको केन्दि्रय कार्यालय सानेपमा भइरहेको छ । निर्वाचित सदस्यलाई बधाई तथा शुभकामना दिनका लागि कार्यलय पुग्ने कार्यकर्ताको घुइँचो बढेको छ । यसअघि सभापतिका लागि शुसिल कोइराला निर्वाचित भइसकेका छन् भने महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंह र चित्रलेखा यादव कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।